I-Master's degree in Design and Urban Planning [UJCV] - ii-Geofumadas
NgoJanuwari, 2016 Ukufundisa i-CAD / GIS, ezintsha, UkuCwangciswa kweziThili
Le yenye yezona umdla degree Central America umninindlu, eqwalasela ukubaluleka koorhulumente beengingqi lakho yongxamiseko ecingelwayo yokuziphatha kwentlawulo kulawulo komhlaba kugxininiswa kuphuhliso loluntu.
Kufika ngexesha umdla, xa University José Cecilio del Valle mtsha isicwangciso wayo nombono wawo ukuba mashishini University of Honduras, kunye izinto ezithandekayo kuyo lweeHedfowuni phantse zonke iinkqubo zalo ngaphandle kweenkonzo kuquka ukufumana iingxelo, ukubeka esweni, ukufundisa; umzekelo onomdla ukuba sicinga ukuba i-priority ye-academy kukufundisa, ukuphanda kunye nefuthe kwiimfuno zoluntu.
I-Master of Design kunye noCwangciso Urban na iadvanteji lwacaciswa-sikhokelo isivumelwano intsebenziswano yale Yunivesithi, i-Han-Institute for Research lweDolophu of the Republic of Korea kunye nenkampani Soosung Engineering, enye enkulu yobunjineli kunye nokwakha yaseKorea. Oku kuchazwa nje ezinefuthe eliphezulu inkqubo graduate, eyenzelwe ukutyebisa nokwandisa umsebenzi lobungcali ukunika isisombululo esibanzi bayile kunye nocwangciso lweedolophu, ezisisiseko ukuphuhlisa izinto zophuhliso zeli lizwe, kufunwa yi kwicandelo loshishino, icandelo likarhulumente , imibutho yoluntu kunye nentsebenziswano ngamazwe ngamazwe, ngokwemiqathango nemimiselo yelizwe jikelele.
Ukuqeqesha abasebenzi ekwaziyo lokubhaqa iingxaki ezidolophini, bagqubuthele iimeko zoqoqosho, zokusingqongileyo, zenkcubeko kunye spatial, ngokusebenzisa izixhobo zobugcisa kunye nemigaqo yoyilo kunye isiseko esomeleleyo theoretical kunye nobugcisa ukuze ngokuqulunqa nokuvavanya iiprojekthi kunye namangenelelo emzimbeni-lomhlaba ijolise ekuphuculeni ubomi basezidolophini
Ukuqeqesha abasebenzi kunye nokuzinikela ophezulu entlalweni kunye neenqobo ezisesikweni, kunye isishwankathelo ukuba ungenelelo ngoncedo isixeko, ngokubonelela iindlela eziphathekayo ukuze zokusombulula iingxaki zasezidolophini kunye yokwakha, sivumele ngokutsha indawo ebonakalayo yile ndoda ebomini ngoku .
Ukusukela abaphuhlisi zasezidolophini baluqonde uxanduva lwabo kwezentlalo, nako ukuphuhlisa iiprojekthi swi-odolo okanye walathisa ukukhula izixeko ngokungqinelana nemiqathango ethile kokusingqongileyo, kunye nezixhobo loyilo ukuqinisekisa ukusebenza kweeprojekthi ezidolophini.
I-Master e Design kunye noCwangciso UJCV Urban uvelise abaqeqeshiweyo imvelaphi olomeleleyo Urban Design, Planning Urban, uLawulo noLawulo lweProjekthi of Urban noPhuhliso Regional, kunye nolwazi lwemiba methodological nawobuchwepheshe evumela ukuba ucwangciso olufanelekileyo, umbutho, inshorensi yokusebenza kunye nokulungelelaniswa kwezixhobo kunye nabantu ukuba bahambisane neenjongo, iziphumo kunye neenjongo zophuhliso lwezidolophini, ezisezidolophini, ezisekuhlaleni nasekuhlaleni.
Okwangoku, i-degree ye-master idibanisa inxaxheba ejongene nobuso kunye ne-6 kwi-8 AM shedyuli e Tegucigalpa, eHonduras. Nangona andizange ndikumangaliswe ukuba kungekudala baya kuba yiyona nto -ukuba njengamanje kubonakala kunzima kakhulu- kungekhona nje ngokuba oku kungenakwenzeka, kodwa kuba iiklasi eziliqela sele sele zikunye nazo zonke iziqulatho zazo.
Ubude beenyanga ze-20 (Ngenye inyanga iinyanga ze-8), ixesha apho izifundo ze-12 zithathwa kwaye iphrojekthi yenkcazo yenziwa.
Isiqulatho sezifundo sisasazwa kwiibhloko ezine, njengokuba ubona, azijoliswanga kuphela kwezobugcisa bendabuko ngenxa yokuqhelana nokuqhubela phambili kwiiNjineli kunye nabaCwangcisi; kumakhosi angenza izicelo kwiingcali zentlalo njengoko kwenzeka nakwamanye amazwe.
1. LoLawulo lweBloko
Ulawulo kunye neSicwangciso soBuchule
Isingeniso kuLawulo lweProjekthi
2. Uhlalutyo lwaseMzaneni
I-Psycho-Social Management of Fragment yase-Urban
3. Uyilo lweBlock
Izibonelelo zengingqi kunye nezixhobo
Imigaqo, iMimiselo, kunye noLawulo lweMvumelwano
4. Ibloko lo Cwangciso.
Ingqongileyo kwiiprojekthi zeeDolophu
UkuQulunqwa noLawulo lweeNkqubo zeZindlu zeNtlalo
Ekugqibeleni, i-seminari yee -sis isenzeka. Enye inkalo ukuba ngokwenene obamba ingqalelo yam ndicinga ukuba yimpumelelo kakhulu, kukuba abafundi ukuthwala phantse zonke iiklasi phambili kwi projekti enye, leyo azaliswa ngokuchanekileyo ekusukeleni ngamaqondo ezahlukeneyo yenkosi. Ekugqibeleni, ukunikezwa kwe-Thesisi kulula kakhulu kodwa ukusetyenziswa kolwazi akukufutshane okuthembisayo.
Iprofayili yeengcali ezisebenzela ezi klasi zibonisa kungekuphela nje zoqeqesho ngam paradigms yamazwe ahambele phambili kwezoqoqosho, kodwa ikwayinkqubo yokukhupha kunye nokufaka izicwangciso zobuchule, zokuphatha nezeshishini. Njengomzekelo, indlela "yezindlu zentlalo" ayinanto yakwenza nezindlu ezincinci, ezikumgangatho ophantsi owakhiwe ngebhondi zikarhulumente, kodwa endaweni yoko umbono wokusetyenziswa ngobulumko kwezithuba ezinamanqanaba ahlukeneyo ezoqoqosho.
Ndicinga ukuba, kakuhle, lo msebenzi -ngaphandle kwezinga lobugcisa- ungenza iingcali nge zenzeko ezingundoqo kule ndawo, ezifana thethwano, ukudluliselwa izimvo kunye nendlela akwiqela umda eziqhelekileyo kucwangciso lokusetyenziswa komhlaba, nto leyo ekwakheni isixhobo kunokuba ukusebenza ebonakalayo igosa likamasipala apho Akunakuncedo kwimbongo e-PDF kwaye idinga isikhokelo sokubeka esweni kunye nokwenza isigqibo ngonyaka ngamnye kufuneka wenze uhlahlo lwabiwo-mali kunye nesicwangciso sotyalo-mali.
UJCV - Ikhasi le-Master eHonduras okanye ngeposi i-postgraduate (at) ujcv.edu.hn
Post edlulileyo«Edlulileyo Ezinye iindlela zokusebenzisa i-QGIS kwi-Android ne-iOS yeselula
Post Next Ukungenisa i-Excel idibanisa kwiQGIS kwaye idale iiPolgonsOkulandelayo "
Enye Impendulo ku "Mlawuli weZakhiwo kunye noCwangciso loMmandla [UJCV]"
URosa Pinto uthi:
Efanelekileyo! Ukuqeqesha amashishini amatsha kwiiprojekthi zasezidolophini ngee-degrees zemfundo ezikhethekileyo kunceda kakhulu kwicandelo, okwangoku libuyele.